Hitantsika fa ny fiainan’I Josefa dia fiainam-pankatoavana. Tsy mba nandà na nanohitra na nampiasa hery izy, tamin’ny zavatra nanjo azy na dia tsy rariny aza. Nanomboka tamin’ny tsy fitiavan’ny rahalahiny azy tany an-tanindrazany izany, nitohy tamin’ny tsy rariny sy ny fiampangàna tsy marina tao an-tranon’I Potifara, ny fanaovana azy tany an-tranomaizina… Ny fiainany manokana nampiavaka azy dia ny fanekeny ny zavatra rehetra nisy fa avy amin’Andriamanitra. Na dia ny fahatongavany tany Egypta aza, araka ny filazany dia avy amin’Andriamanitra. Ianareo hoy izy, no nihevitra izao ho ratsy, fa Andriamanitra kosa nanana ny hevitra tsy takatry ny saina, tao ambadik’izany rehetra izany , ho tsara;
Ry Havana malala, aiza ho aizan’izany ny toetrantsika kristiana? Manoloana ny mpiray tam-po, ny ray aman-dreny, ny Havana, ny manodidina, indrindra ireo nanao tsinontsinona antsika? Ary manao ahoana rehefa mba nahazo toerana ambony isika, na nambinin’Andriamanitra ka tafasondrotra ihany na dia nailikilika aza. Ary rehefa tafahaona amin’ilay olona nanao ratsy antsika taloha amin’izao fotoana, manao ahoana? Alaovy sary an-tsaina ilay olona nampigadra anao tsy ahoan-tsy ahoana, ilay nanendrkendrika anao ary nandroaka anao tsy hiasa intsony, ilay nangalatra ny volanao, na ny vadinao…Hevero raha misy izany fihaonana izany, ilaozantsika mihodina ve, sa ahoana?
Eny tompoko, misy vokany dia misy vokany tokoa ny fanetren-tenantsika sy ny fiaretana fahoriana. Jereo fa ny fahavalo mipararetra sy matahotra manoloana ny toetran’Andriamanitra. Koa tianao ho resy ve ny fahavalonao tsy hoe resy any amin’ny tribonaly an, fa ho resy eo an-tongotrao sy eo an-tongotr’Andriamanitra. Manana fo tahaka ny an’I Josefa mamelà heloka tanteraka ve isika, manoloana ny rahalahintsika rehetra? Tsy ny mpiray tam-po ihany io akory, fa ny rahalahintsika ao amin’ny Tompo niaaraka tamintsika nefa namadika antsika, iray Fiangonana tamintsika, niara-nianatra tamintsika, naira-niasa tamintsika…Raha tonga ny fotoana anankiray ka tsy maintsy hifanena na hihaona, inona re no zavatra hisy e? Isaky ny mihaona amin’ny olona voakasik’izany ary ianao, manomboka androany, dia tsarovy Josefa sy ny tomaniny, DIA MBA MANAOVA TOY IZA NY KOA. Ny fitomanianao dia HAMAFA NY HELOK’ILAY NANAO RATSY TAMINAO ary hahatonga azy handray ny famonjen’Andriamanitra. Fa raha sanatria manozona kosa isika, dia hanidy azy ireny mandrakizay ao amin’ny tranomaizin’ny heloka sy ny fitsaràna izany. Fa izay vahantsika ety an-tany mantsy, hoy Jesosy, dia ho vahàna any an-danitra.